सेप्टेम्बर | 2009 | BIVAS
Monthly Archives: सेप्टेम्बर 2009
वडा दशैंको शुभकामना !!!
वडा दशैंको महान् उपलक्ष्यमा हिन्दुधर्मको अनुसरण गर्ने संपुर्ण मित्रहरूमा हार्दिक मंगलमय शुभकामना !!!
Posted by CHINTAN on सेप्टेम्बर 27, 2009 in HOME, SPECIAL
माओवादीप्रति भारतको दोहोरो मापदण्ड
सर्वहारा वर्गको अधिनायकवाद स्थापना गर्ने लक्ष्य राखेको भारतीय कम्यूनिष्ट पार्टी माओवादीले भारत सरकारलाई चिन्तित तुल्याएको छ । माओवादीको गतिविधि क्रमैसंग बिस्तार हुंदैगएको कुरा भारतका प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह स्वयंले स्वीकारेका छन् । मूलरुपमा ग्रमीण क्षेत्रमा सरकारी निकाय समेतलाई प्रभावहीन बनाउंदै लगेको माओवादीलाई भारत सरकारले ‘नियन्त्रण’ गर्न नसकेको वास्तविकता प्रधानमंत्री सिंहले गत हप्ता बताए । Read the rest of this entry »
Posted by CHINTAN on सेप्टेम्बर 27, 2009 in BLOG, GUEST
कतै दशैं, कतै दुःखै दुःखका पहाडहरु
कुमालेको जीवनचक्र जस्तै गरी घुम्दै फेरि नेपालीको घरआंगनमा आइपुगेको छ दशै । दशैंमा कमाउन मुग्लान पसेकाहरुदेखि सरकारी जागीर खान शहर पसेकाहरुसम्म घर फर्किदै छन् । हुने खानेदेखि सामान्य मानिसलाई समेत दशैंको चटारोले छोएको छ । यही चटारोसंगै भारतको दिल्लीबाट घर फर्किन हतारिएका छन् रोल्पा झेनामका ३६ बर्षीय धनबहादुर खत्री । Read the rest of this entry »
Posted by CHINTAN on सेप्टेम्बर 27, 2009 in NEWS, SPECIAL
सांस्कृतिक रुपान्तरण र समन्वयवादी प्रवृत्ति
अहिले नेपालीहरु त्यसमा पनि हिन्दुहरुको चाडपर्वको मौसम आएको छ । यसैसंग परम्परागत चाडपर्वहरुलाई हेर्ने दृष्टिकोण, संस्कृति र सांस्कृतिक रुपान्तरणको प्रश्न पनि स्वभाविकरुपले टड्कारो रुपमा जोडिएको छ । यो प्रश्नको उत्तर खोज्न नेपालमा खासगरी प्रगतिशील सांस्कृतिक रुपान्तरणका पक्षपातीहरु विगत ६ दशकभन्दा बढी समयदेखि कृयाशील छन् । तथापि व्यवहारिकरुपमा अझ यो प्रश्नमा केही अन्यौलताहरु जारी छ । Read the rest of this entry »
धर्म र चाडपर्व’bout एक टिप्पणी
धर्म र चाडपर्व’bout हाम्रो समाजमा खासै चर्चा र बहस नै हुंदैन । चाहे कम्युनिष्ट विचारका समुदाय हुन् वा गैरकम्युनिष्ट विचारका समुदाय हुन् । सबैले चाडपर्वको समय आयो भने खुरुखुरु परम्परागत शैली र प्रचलन अनुसार मान्दै आएका छन् । नेपाली हिन्दु आर्यन समुदायमा विशेष गरि श्रावण शुक्ल पञ्चमी देखि चाडपर्वहरुको शुरुवात हुन्छ । जसलाई नागपञ्चमी भनिन्छ । त्यसपछि जनैपूर्णिमा, कृष्णष्टमी, तीज, ऋषिपञ्चमी, सोह्रश्राद्ध, नवदुर्गा हुंदै विजयदशमी र भाइटिका (तिहार) सम्म आउंदा हिन्दुहरुका महत्वपूर्ण चाडपर्वहरु सकिन्छन् । Read the rest of this entry »
यसकारण म दशैं मान्दिन
अभिवादन तथा प्रणाम !
तपाईंहरूले भन्नुहोला कि यतिखेर त शान्तिकाल छ, त्यसैले अब त दशैं-तिहार मान्न छोरो आएपनि त हुन्थ्यो, किन आउंदैन होला । छरछिमेकीहरूले पनि त्यसै भन्छन् होला ‘हो त नि सांची तपाईंहरूका छोरा किन आउंदैनन् ?’ आफ्नो वरिपरिका पार्टी कार्यकर्ताहरूलाई देखेर तपाईहरूलाई लाग्दो होला कि अरु त सबै घर जान्छन्, टीका लाउंछन् हाम्रो छोराले मात्रै किन त्यसो गरेको होला ? यस्तै यस्तै तर्कनाहरू खेल्छन् होला मनमा । यस विषयमा केही कुरा गर्नु उचित ठानेर दशैंका ’boutमा यस चिठीमार्फत् चर्चा गर्न गइरहेको छु । Read the rest of this entry »
हुनेलाई दशैं तिहार नहुनेलाई … … …
समनी विक-६३ बिहान घाम लाग्दा नलाग्दै डोको बोकेर नातिसंगै कटुवाखोलाको छेउमा पुगिसकेकी हुन्छिन् । दिनभरजसो उनी त्यही खोलाकै बगरमा बिताउंछिन् । उनलाई लाग्छ, जिविकोपार्जनका लागि बगरको ढुंगा जम्मा गर्नु र गिट्टी कुट्दै दिन बिताउनु आफ्नो कर्म हो, भाग्य हो । र, दिनदिनै आफ्नै भाग्यलाई सराप्दै उनी गिट्टीसंगै आफ्नो जीन्दगी नै कुटिरहेकी छिन् । ‘मरुं काल आउंदैन, बांचु मनमा सन्तोष छैन’ उनले भनिन्, Read the rest of this entry »
Posted by CHINTAN on सेप्टेम्बर 20, 2009 in NEWS